China China IP65 yoKhuselo loLuntu oluvunyiweyo UkuKhanya okuNgxamisekileyo kokuKhanya kwe-LED kunye neFektri | Saselux
Imo yokusebenza yokusebenza igcinwe ingagcinwanga
Ukusetyenziswa kwamandla: 1.6W max, 300LM
Oukuphuma: 3W max.
Lobukhulu: 351 * 117 * 78.3mm
① [Iparamitha ezineenkcukacha] Isibane esikhokelekileyo sokukhanya senziwe ngezindlu ze-ABS zenaliti. Igcine imo yokusebenza engagcinwanga. Isiphumo sebhetri ephezulu ye-3.6V nickel cadmium, 110-240V yesicelo esingxamisekileyo sokuhlala kunye nesorhwebo.
② [Iwaranti yonyaka emi-5] Isibane esingxamisekileyo esikhokelwe ngu-SASELUX sidlulisiwe isiqinisekiso se-UAE-COC, TUV, UL kunye ne-CE. Siyathembisa iminyaka emi-5 iwaranti kumalungu ombane nakwizindlu, iminyaka emi-2 iwaranti yebhetri. UMGANGATHO OPhakamileyo ngexabiso eliphantsi yeyona njongo yethu iphambili.
③ [Umgangatho ophezulu] Owona mgangatho uphezulu sisithembiso kubo bonke abathengi. Ukukhanya okungxamisekileyo kwenziwa ngezinto ze-THERMOPLASTIC ABS HOUSING. Oku akuyi kuguga emva kokusebenzisa ixesha elide kwaye kuqinisekisa ukomelela kwesakhiwo ngasinye ngexesha lofakelo kunye nokudityaniswa. Iqhosha lokuvavanya elisetyenziswe koku kukhanya okungxamisekileyo kuye kwavavanywa ngo-2000 ukuqinisekisa ukuba ukukhanya okungxamisekileyo kunokukhanyisa ngokuzenzekelayo ngexesha lokusilela kwamandla, kwaye iqhosha lokuvavanya aliyi kusilela emva kokuba amandla ebuyile.
④ [Ixesha eliNgxamisekileyo elide] I-3.6V nickel cadmium ibhetri yogcino inikezela ngeeyure ezi-3 zokukhutshwa ngexesha lokuphuma kombane.
Information [Ulwazi lwe-SASELUX] SASELUX yasekwa ngo-2011, inamava kwimveliso ekhokele ukukhanya okungxamisekileyo kunye neemveliso zombane iminyaka emininzi. Njengophawu olujikeleze lonke olubandakanyeka kuphuhliso, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo yokukhanyisa kunye neemveliso zombane kwiimarike kwihlabathi liphela, sibandakanya ubuchwephesha bobugcisa kuyilo lweemveliso kunye neenkqubo zokuvelisa. I-SASELUX ithengisa iziqwenga ezingama-70 ezigidi zeemveliso zombane minyaka le. Ngoku, silapha kuwe ngalo lonke ixesha, kunye neemveliso ezilungileyo.
Egqithileyo E-Australia imigangatho yokuKhanya okungxamisekileyo kwe-LED
Okulandelayo: Ukuthengisa okuPhezulu okuKhanyisiweyo okuPhezulu eMntla Melika